Tokony hampiasa GPS ve ireo mpanara-maso hanarahana ny mpiasan'izy ireo | Singapore Top Mini GPS Tracker manokana ho an'ny autism / Autistic Kids & Dementia Anti-panahy
Ny resaka momba ny tsiambaratelo rehefa mifehy ny mpiasa finday amin'ny alàlan'ny GPS dia mitana renirano ranomainty, hatrany am-piandohana fa maro ireo olona eo amin'ny andaniny sy ny orinasa ary ny mpiasa, izay manao ny fanontaniana mitovy.
Misy orinasa te-hitady na hanaraka ny satan'ny mpiasan'izy ireo amin'ny alàlan'ny GPS. Amin'ny alàlan'ity rafitra fanaraha-maso GPS ity dia azonao atao ny mitantana ny asanao ary hahafantatra ny misy anao amin'ny fotoana rehetra. Fa ara-dalàna ve ny fampiasana an'io loharano io amin'ny orinasa?
Ny mpampiasa dia mahazo manara-maso ny mpiasany, saingy ao anatin'ny fetra tery ihany. Ny rafitra fanaraha-maso sy fifehezana, izay natao hanaraha-maso ny fihetsiky ny mpiasa eo amin'ny sehatry ny asa ihany, dia voararan'ny lalànan'ny asa (And. 26 ArGV3). Raha ilaina ny fanaraha-maso, ohatra, mba hisorohana ny halatra na hanomanana drafitra tsara kokoa, dia tsy tokony hanelingelina ny fahalalahan'ny mpiasa mihetsika izy ireo.
Ny fanaraha-maso amin'ny alàlan'ny GPS dia avela, araka ny mpiaro ny tsiambaratelo. Fa raha atao fizahan-tany izany, dia tsy voatery hifehezana sy tsy hihambahamba ny mpiasa. Ny mpampiasa dia tsy maintsy manara-maso mandritra ny fotoana tsy miova amin'ny efijery fotsiny ny mpampiasa, raha ilaina amin'ny antony fiarovana, ohatra. Ny fanaraha-maso ny fotoana tena misy ankehitriny dia avela, ohatra, amin'ny fikarohazana fitaterana vola na rehefa mitondra entana mampidi-doza.
Nampandrenesina ny mpiasa momba ny fanaraha-maso ary efa nampahafantarina ny antony nitrangan'ny fanaraha-maso, izay angonin'ireo angon-drakitra, izay manana izany daty izany, mandra-pahoviana izy ireo dia voatahiry ary manana alalana miditra ny mpiasa.
Ny zavatra voalohany tokony hataonao dia ny mampahafantatra ny mpiasa fa ho eo amin'ny GPS no hitantana ny tombontsoan'ny asany. Amin'izany fomba izany dia ho fantatrao fa ny angon-drakitra voangona miaraka amin'ny GPS dia azo ampiasaina ho an'ny tanjona toy ny fanandramana ny dingana, ny fitomboan'ny filaminana, ny fanaraha-maso ny asa, ny famporisihana sy ny fandaharan'asa ary ny sazy mety hitranga.
Azon'ny mpampiasa atao ny mametraka fitaovana GPS ao amin'ny fitaovana isan-karazany, ao anatin'izany ny fiara sy ny telefaona finday. Izany dia manome ny antsipirian'ny mpampiasa an-trano ka hatramin'ny fotoana fohy mikasika ny toeran'ny mpiasa iray, nambaran'ny mpandrindra ny halavola sy ny latitude, izay ampitaina amin'ny ekipa iray izay ahafahan'ny mpampiasa manara-maso. Raha apetraka amin'ny fiara iray, ny fitaovana GPS dia afaka manome ny hafainganam-pandehan'ny fivezivezen'ny fiara.
Mety ve ny mametraka GPS amin'ny telefaona finday ho an'ny mpiasa iray?
Raha mbola alain'ny orinasa ny takelaka na tablette fa tsy ilay mpiasa dia mazava ny valiny: eny. Raha tsy izany (raha ny mpiasa dia lasan'ilay mpiasa) dia tsy maintsy ampandrenesina izy ary omeny ny fanekeny ho hita amin'ny alàlan'ny telefaona azy.
Ny mpampiasa dia afaka manana ny teknolojia GPS ary apetrany amin'ny fitaovana an'ny orinasa izay entin'ny mpiasa miasa aminy nefa tsy mila fahazoan-dàlana mialoha alohan'ny mpiasa.
Ny tokony hoheverina ho toerana momba ny GPS
Na dia efa nahavita an'ity dingana ity aza ny mpiasa, dia tsy afaka manadino ny fitsipiky ny proportionalit ianao ianao ary ny ara-dalàna tanteraka ny fitadiavana ilay mpiasa amin'ny alàlan'ny GPS.
Ny Fitsarana momba ny lalàmpanorenana dia nametraka andiana fetra izay heveriny fa zo fototry ny mpiasa izay tokony hanaja ny mpampiasa. Amin'izany toe-javatra izany, ny fomba fanenjehana GPS dia ara-dalàna raha toa ka mahafeno ireo fepetra ilaina ireto:
Ny fametrahana GPS dia tsy maintsy mahavita hahatratra ny tanjon'ny fampiasana azy.
Fitsapana ny filana
Ilaina io fepetra io satria tsy misy fanafody antonony hafa mba hahatratrarana ny tanjona miaraka amin'ny fahombiazana mitovy.
Ny fitsarana ny proportionalite henjana
Ity fepetra ity dia tsy maintsy mahay mandanjalanja, mahazo tombony na tombony mahaliana amin'ny ankapobeny fa tsy manimba ireo soatoavina na fananana mifanohitra.
Raha te hahalala na mampiasa rafitra GPS fanaraha-maso hiasa ny mpiasa, ara-dalàna ny hanao fandalinana tranga ary tena mazava tsara fa, na inona na inona toe-javatra dia afaka mahita ilay mpiasa ivelan'ny androny.
Noho izany, ny fitaovana na fiara izay nametrahana ny rafitra fanaraha-maso ny GPS dia manana safidy ny hanafoanana io asa io amin'ny toe-javatra izay hampiasana azy ireo ho an'ny tanjona manokana.
Izay lazain'ny lalàna momba ny fiarovana ny data
Ny LOPD dia manazava fa rehefa miatrika data tsy miankina dia tsy maintsy arovana izy ireo raha tsy misy lalàna manohitra izany. Ary izany no mitranga amin'ny andininy 20.3 an'ny statut'ny mpiasa, "ny mpampiasa dia afaka mandray ny fepetra hitany fa mety indrindra amin'ny fanaraha-maso sy ny fanaraha-maso mba hanamarinana ny fanarahan-dalàna ataon'ny mpiasa amin'ny adidiny sy ny asany, ary mitazona azy aho ary ampihariko ny fiheverana noho ny fahamendrehany olombelona ”
Na ahoana na ahoana, dia manaraka izany, na dia afaka mametraka GPS ao amin'ny findain'ilay mpiasa aza ny mpampiasa, dia tsy manafaka azy amin'ny adidy hampahafantatra amin'ny mpiasa manokana izany, izay manan-jo hahafantatra fa “arahi-maso izy. "
Mandra-pahoviana no mety ho voatahiry ny fampahalalana nangonina?
Amin'ity tranga ity, misy koa ny andiam-panabeazana ho an'ny fikajiana ny angon-drakitra azo raisina fa tsy manitsakitsaka ny zon'ny mpiasa. Ny fotoana ambony indrindra azon'ny vaovao azo raisina dia ny 2 volana, na dia azo itazonana lava kokoa anefa ny angon'ity toerana ity.
Voatahiry mandritra ny fotoana maharitra ny angon-drakitra
Raha ampiasaina io data io mba hanehoana ny fanatanterahana ny serivisy nefa tsy misy porofo omena amin'ny fomba hafa. Amin'ity tranga ity dia azonao atao ny mihazona ny vaovao hatramin'ny herintaona.
Raha misy fitsipika voafaritra ho an'ny toe-javatra ity, mandritra ny fe-potoana napetraka.
Raha ampiasaina amin'ny fitehirizana ny tantara miaraka amin'ny famindrana rehetra hanamboarana ireo làlana vita, dia azo tehirizina ihany koa izy io.
Data izay azon'ny mpampiasa alalana amin'ny GPS
Fotoana manomboka ny andro
Ora fiatrehana ny fiatoana
Toerana izay andalanao miaraka amin'ny fiaran'ny orinasa ary mijanona
Ny hafainganam-pandehan'ny fiara
Fotoana rehefa mandeha ny fiara ary rehefa mijanona
Ny kilaometatra vita amin'ny asa fiasana tsirairay
Na ahoana na ahoana, tsy misy ifandraisany amin'ny fiainanao manokana na ny fiainanao sy ny zavatra rehetra ananan'ny fiainanao manokana.
Araka ny fahitanao azy, ny fitadiavana ilay mpiasa amin'ny alàlan'ny GPS dia tsy maintsy mahafeno fepetra arak'asa matihanina ary apetraka ao anatin'ny sehatry ny fanomezana ny asany.
8814 Total Views 1 Views Today